Joogitaanka Bruno Le Maire, Wasiirka Dhaqaalaha, Maaliyada iyo Dib u soo kabashada, Elisabeth Borne, Wasiirka Shaqada, Shaqaalaha iyo Is-dhexgalka, Emmanuelle Wargon, U wakiishay Wasiirka Kala-guurka Ecolojiga, oo mas'uul ka ah Guryeynta, iyoAlain Griset, U wakiisho Wasiirka Dhaqaalaha, Maaliyada iyo Dib u soo kabashada, una xilsaaran shirkadaha yar yar iyo kuwa dhexe, iskuxidhka xirfadlayaasha ee dhismaha iyo waaxda howlaha guud waxay sameeyeen balanqaadyo adag oo ku saabsan shaqada iyo tababarka xirfadaha Guusha Faransiiska ayaa soo nooleyneysa.
1. France Relance waxay siisaa taageero toos ah waaxda dhismaha
Ku dhowaad 10 bilyan oo euro oo ay maalgeliso Gobolka ayaa taageeri doonta waxqabadka qaybta dhismaha. Qeyb muhiim ah oo ka mid ah qorshaha dib u soo kabashada, 6,7 bilyan oo euro, ayaa loogu talagalay dayactirka tamarta ee dhismayaasha dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay si si weyn loo yareeyo qiiqa CO2, dhismuhu waa isha rubuc qiiqa.
Tan waxaa lagu dari doonaa maalgelinta dadweynaha ama kuwa gaarka loo leeyahay, iyo tallaabooyinka kale ee France Relance ee taageeraya waaxda howlaha guud, sida qorshaha maalgashiga Ségur de la Santé, dardargelinta mashaariicda kaabayaasha qaarkood ama gargaarka. dib ugu soo noqoshada dhismaha waara kaas oo ...
Gobollada dhinacooda, xiriirada dhismaha ee xirfadleyda ah waxaa ka go'an inay dhiirrigeliyaan dib u bilaabidda howlaha, shaqaalaynta iyo tababarka xirfadeed ee qaybta dhismaha. July 10th, 2021Tranquillus
READ Miyaan xaq u leeyahay inaan diido inaan dib u bixiyo tigidhada anigoon haysan dukumentiyo taageeraya?
horeTalooyinka PowerPoint 2019: Shaxda Pie Animated
socdaTilmaamaha PowerPoint 2019: Buug-hawleedka Naqshadeynta
Waxa la ii soo gudbiyay ogaysiis karti-darro: waa maxay cawaaqibta?
Sidee loo baabi'iyaa heshiiskaaga shaqo-barasho?